Manamafy raha teo ny mpitsabo fa maro ny tombontsoa amin`ny fanaovana azy ireny. Ankoatra ny fiarovana amin` ny fihanaky ny aretina COVID-19 dia maro ireo aretina voasoroka amin` izany. Misoroka amin` ny loto sy vovoka miditra ao anatin` ny vava sy ny orona ihany koa ny fitondrana arotava izay mitondra mikraoba sy aretina maro. Toy ny zava-drehetra dia misy ny lafin-tsara sy lafin-ratsy amin`ny arotava. Mila fitandremana ny fanaovana azy ireny. Araka ny fanazavan` ny mpitsabo iray dia mila misolo isaky ny adin'ny efatra, izany hoe arotava roa maraina ka roa kosa ny hariva. Azony sasana sy pasohina izany rehefa ny hariva. Ireo olona marary ka manana olana eo amin`ny fitaovam-pisefoana toy ny kabon'orona, olona sempotry ny gripa be, “asthmatique” na misohika, kambon-tenda, androbe sy maro hafa … dia tsy tokony manao ireny fitaovana ireny. Na izany dia tokony hitondra fanamarinana ara-pahasalamana (certificate medical) izy ireo mba hisorohana ny olana izay mety hiseho amin`ny mpitandro filaminana manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin` ny fanjakana izao.